११. बाँके सार्की जसबाट मैले सिकेँ सीपको विशिष्टीकरण !
Posted by Nirajan Thapa October 26, 2013
म बच्चै थिएँ त्यतिखेर जतिबेला उनी बुढ्यौली उमेरमा पनि सक्रिय जिन्दगी बाँच्दै थिए । त्यतिखेर उनको उमेर कति थियो म उति भेउ पाउँदिन तर उनको मुहारमा जुन ‘चमक’ म पाउँथे त्यो अतुलनिय चमक थियो । त्यहि आकर्षणले भरिएको चमक लिएर उनी बेलाबेलामा हाम्रो घरमा आउने गर्थे । उनी बुढै भएपनि तगडा थिए । जजसकोमा उनले काम गरे र खाना खाए उनीहरुको जिकिर थियो – “बाँकेको जस्तो खुवाई गाउँमा कसैको छैन !” काम त उनी अरु केहि गर्दैनथे सिवाय दाउरा चिर्नु बाहेक, तर उनको दाउरा चिराई गाउँमै अरु कसैको थिएन । उनको दाउरा चिर्ने सीपको तारिफ नगर्ने गाउँमा कोही थिएन । हुन पनि उनको त्यो सिप बेजोड थियो । एकदम तारिफयोग्य !
हो, उनै बाँके मामा जसलाई दाउँरा चिर्नका लागि सबै गाउँलेले निम्ताउने गर्थे । कहिले काही त निकै दिन सम्म उनलाई पर्खनु पर्ने हुन्थ्यो । जब घरमा खाना बनाउनलाई दाउरा सकिएको हुन्थ्यो अनि आमाको गनगन शुरुहुन्थ्यो – “यी बाँके दाईलाई दाउरा चिर्न आऊ है भनेको नी एक महिना भैसक्यो, अहिले सम्म आछैनन ।” हाम्रा बालाई पार्टीको बाहेक घरको काम गर्ने खासै फुर्सद नहुने अनि म र भाई सानै, त्यसकारण पनि आमालाई निकै दुख थियो त्यतिखेर घरायसी कामकाज गर्नलाई । बन फुकाउँदा र कहिलेकाही आफ्नै जग्गाको बुढा रुखहरु ढालेपछि दाउरा चिर्नु पर्ने काम आइलाग्थ्यो, अनि त्यो काम गाउँमा बाँके मामा कसैले गर्न जान्दैनथे !
प्रायः दाउरा चिर्ने काम पर्दा बिहानको खाना हाम्रैमा खाने गरी आउँथे बाँके मामा । हाम्रोमा त्यस्तो दिनभरीको दाउरा चिराई पनि हुन्थेन । अलिअलि हुन्थ्यो जसलाई हुने बिहानबिहान आएर गर्थे । यस्तो गर्दा उनलाई दुईचिज फाइदा हुन्थ्यो । पहिलो उनी बिहान दाउरा चिरेर त्यहि घरमा खाना खान पाउँथे, दोश्रो चाँहि बिहान एक ठाउँमा काम भ्याएर दिउँसो अर्काकोमा जान भ्याउथे । यिनले दाउरा चिरेको हेर्न मलाई निकै नै आनन्ददायक लाग्थ्यो । अनि कहिलेकाही यिनले दाउरा चिरेको हेर्ने पनि गथेँ म । तर उनले चाँहि हप्काउँथे – यहाँ नजिकै नबस, दाउराको चोइटोले लाग्छ ! उनले हप्काए पनि म अटेर गरी गरी उनको सीप हेर्थे, मनमन सोच्दै कि यी मामाले झैं दाउरा चिर्न जाने त आमालाई सजिलो पनि हुने, खुशी पार्न पनि सकिने । एकदुईपटक उनले दाउरा चिर्दै गर्दा बञ्चरो मागेर दाउरा चिर्ने प्रयास पनि गरेको छु, तर कहिल्यै एउटो फक्ल्याँटो पनि निकाल्न सक्दिनथेँ अनि उनी कराउँथे – “तिम्रो रहरले हुन्न भान्जा, जाऊ पढ्न । जे काम आउँछ त्यो पो गर्ने हो । तिम्लाई दाउरा चिर्न आउन्न, मैले पढ्न जान्दिनँ !” तैपनि कहिलेकाही घरमा खाना बनाउनलाई दाउरा चिर्नै पर्यो भने बञ्चरो बोकेर दाउरा चिर्न म आफै कस्सिन्थेँ । तर दुईचोट प्रहार गर्न नपाउँदै आमाले कराईहाल्नु हुन्थ्यो – “उता जा गाईने अहिले आफ्नै खुट्टामा हान्लास् !”
बाँके मामा खाना चाँही निकै नै खान्थे । तर पनि उनको खुवाईको विषय लिएर उनको अगाडि कसैले पनि केही चित्त दुखाई गर्दैनथे । सायद गाउँलेहरुलाई, “धेरै खान्छौ” भनेर गुनासो गर्दा उनले दाउरा चिर्ने काम त्यसै छाडेर सन्केर हिड्दे भने त बर्बादै हुन्छ नि, भन्नेपनि लाग्दो हो । त्यसकारण मान्छेहरु उनको दाउरा चिर्ने कलाको मात्र प्रशंसा गर्ने गर्दथे । छिटो पनि र राम्रो पनि दाउरा चिर्ने उनको त्यो विशेष कलाको कारणले गर्दा पनि गाउँलेहरुका लागि विशेष महत्वको मान्छे थिए ।
हुन त बाँके मामा स्वर्गे भैसकेको पनि वर्षौ भैसक्यो तर उनले चिरेको दाउराबाट पाकेको खाना खाएका धेरै चौरलीहरुले अहिले विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न सफलताहरु हात पारेका छन । मलाई थाहा छैन मेरा कति गाउँलेहरुले उनलाई अझैसम्म स्मरण गर्दछन । तर मैले उनलाई आज पर्यन्त बिर्सिन सकेको छैन, बरु मेरा जीवनका एक प्रेरक ब्यक्तित्व बनेर उनी मेरो मनमस्तिष्कमा छाइरहेका छन् । उनले मलाई सिकाएका छन् – तिमीजस्तो सुकै होऊ तर तिम्रो विशेष कलाको अगाडि दुनियाँ लम्पसार पर्दछ । त्यसकारण तिम्रो आफ्नो दक्षता के मा छ त्यसमा तिमी परिष्कृत हुँदै जाऊ । सफल बन्दै जाऊ । विशेष बन्दै जाऊ । हो, बाँके मामा मैले पनि अब आफ्नो एउटा क्षेत्र तय गर्ने बेला भएको छ ! साहित्य रोजूँ कि म समाजसेवा ? राजनीतिमा मेरो दक्षताको श्रीवृद्दि होला कि ब्यवसायमा ? म बिडम्बनापूर्ण समयबाट गुज्रिरहेको छु । हो मामा म अझै बिलखबन्दमा छु ।